Keenista Falanqaynta Shirkadaha WordPress | Martech Zone
Keenista Falanqaynta Ganacsiga ee WordPress
Khamiis, Janaayo 14, 2010 Jimco, Nofeembar 2, 2012 Douglas Karr
Labadii bilood ee la soo dhaafay, waxaan ka shaqeynayay mashruuc qarsoodi ah oo qurux badan. Webtrends waa macmiil aniga ah oo aan ka caawineyno yareynta qiimaha halkii hogaamiye, kordhinta sicirka beddelka iyo hagaajinta muuqaalka internetka (Waan ogahay in taasi guud tahay… laakiin nimankan waxay ku jiraan suuq tartankiisu aad u sarreeyo!). Iyada oo tirada badan ee ganacsiyada ee adeegsanaya WordPress, macno ayey sameysay in Webtrends ay bixin doonto deeq isku dhafan… marka waan dhisnay.
Qalabka Webtrends ma aha oo kaliya shey yar oo xariif ah oo lagu daro Analytics lambarkaaga u dhig - taasi way sahlanaan lahayd. Taabadalkeed, waxaan keenay Webtrends cajiib ah Analytics galay galka WordPress!
Mashruucu wuxuu lahaa caqabado! Halka Webtrends API waa mid ka mid ah waxyaabihii ugu fiicnaa ee aan abid isticmaalo (riix batoonka barnaamijkaaga Analytics si aad u hesho API wac!), Iskuday inuu bixiyo adeegsade adeegsade gaar ah oo u dhigma WordPress ayaa adkayd laakiin waxaan u maleynayaa inaan qodnay. Waxaa jira bog dejin ah oo aad ka buuxiso kanaga API faahfaahinta oo xulo koontadaada…. oo waad kacaysaa oo socotaa!
Dashboard-ka sidoo kale waa 100% Ajax loo wado si loo hubiyo in waqtiga xamuulka la hayo ugu yaraan. Farxad ayey ahayd in laga dhex shaqeeyo WordPress 'qaabka amniga Ajax (wax yar oo halkaas ah, laakiin waxaan garwaaqsanahay baahida loo qabo in la helo mid wanaagsan!).
Haddii aad tahay Webtrends macmiil oo waxaan jeclaan lahaa in nala tijaabiyo beta, fadlan ii soo sheeg. Server-kaaga wuxuu u baahan doonaa inuu ku shaqeeyo PHP 5+ maktabada cURL oo karti u leh si API wicitaanada waa la heli karaa! Waxaan ka hadli doonaa waxyaabo badan oo ku saabsan fiilada Hawlgal 2010!
WARSIDAHA: Waxaan ilaaway inaan xuso taas Ole Laursen caawiyay kooxda sidoo kale. Ole wuxuu naga caawiyay inaan si sax ah ula dhexgalno FLOT plugin. DUFAN waa il-furan jQuery ku saleysan mishiinka jaantuska hodanka ah. Aad ayaan uga xumahay inaan ilaaway inaan xuso Ole! Wuxuu ahaa mid cajiib ah in lala shaqeeyo.
Tags: webtrendswebtrends wordpressplugin WordPress
5 Fure u ah Magacaaga Shakhsiyeed ee guuleystay
Calaamadeynta iyo sawir-qaadista siyaasadda
Doug - tani waxay u egtahay mid fiican - si fiican ayaa loo qabtay
jeclaan lahaa in aan isku dayo sheyga markii la helo
Jan 14, 2010 saacadu markay ahayd 3:08 PM
Mahadsanid Paul! Waxay ahayd madadaalo… fursado badan oo lagu sii wanaajin karo sidoo kale. Webtrends waxay leedahay API weyn, way ka fududeeysay. Qaybta ugu adkayd waxay ahayd dhisidda jaantusyada is-dhexgalka ah (waad ka gudbi kartaa dhibcaha). 😀
Shaqo cajiib ah. Naqshaddan / xalkaani waa mid xariif ah. Ma sugi karo inaan tijaabiyo.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku siiyo wordpress-kaaga plugin iskuday. Waxaan hayaa dhowr bog. Had iyo jeer xiisayso wax cusub. Anigu ma ihi macmiil laakiin waxaan ku arkay qoraal boggooda ku qoraya oo dhahaya waxaan halkan kuugu soo gudbin karaa faallo halkan ah haddii aan xiiseeyo isku dayga. Kaliya ii soo sheeg.
Febraayo 15, 2010 saacadu markay tahay 5: 28 AM
Magacaygu waa Vittorio,
Waxaan ka shaqeeyaa Talyaaniga ENEL shirkad koronto oo la shaqeysa webtrends waxaanan xiiseyneynaa inaan u adeegno sidii tijaabada beta.
sideen tan ku samayn karaa?
Mar 1, 2010 at 6: 37 PM
Waxaan jeclaan lahaa in aan jaleeco fiilada haddii aad naxariis fiicnaan laheyd. Waxaan hayaa qaar macaamiil ah oo wata WebTrends iyo WordPress oo jeclaan lahaa. Ma loo heli karaa wax laga soo dejisto meel?
Tani way fiican tahay. Waxaan hayaa mashruuc ku socda WordPress oo waliba u baahan WebTrends, suurta gal ma tahay in la soo dejiyo qalabkan?
Apr 14, 2010 at 3: 25 PM
Tani waxay umuuqataa mid fiican. Wali miyaad raadineysaa dad beta ka tijaabiya fiilada? Waxaan jeclaan lahaa inaan ku dayo ku xirkeena WordPress MU.
Apr 20, 2010 at 3: 56 AM
Isdhexgalka ayaa u muuqda mid rajo leh. Waxaan (at ramboll.com) jecel nahay inaan awoodno inaan tijaabino. Waxaan kaliya ku haynaa baloogyo gudaha gidaariga xilligan, laakiin waxaan billaabaynaa boggag dibadeed laba toddobaad gudahood. Ma jirtaa meel aan ka soo dejisan karno, mise waxaad ku dhowdahay inaad sii deyso nooca ugu dambeeya?
Jun 19, 2010 at 3: 02 PM
Tani waa wax weyn! Waxaan jeclaan lahaa tijaabada beta. Waxaan hayaa dhowr goobood oo aan kula soconno webtrends.
Jun 17, 2011 at 12: 22 PM
Runtii waan ku raaxeystaa aqrinta qoraalada kujira maqaalkan
Jun 27, 2012 at 4: 48 PM
Hi Doug - Waxaan xiiseynayaa kumbuyuutarkaaga. Wali ma horumarineysaa tan? Ma ku jirtaa keydka keydka WordPress? Way adag tahay in la sheego sida hadda maqaalkani u yahay maaddaama uusan taariikh jirin, laakiin waxaan rajeynayaa inay tani tahay mid hadda socda oo aad wali taageereyso Faahfaahin kasta waa caawimaad - mahadsanid kahor!
Sep 18, 2015 at 10: 52 AM
Heather, waxay ogaatay inaad tahay faallooyinka ugu dambeeyay. Miyaad awood u laheyd inaad hesho macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sheybaarkan?
Sep 18, 2015 at 10: 51 AM
Doug, ma jiraan wax cusbooneysiin ah oo ku saabsan qalabkan wax lagu dhejiyo? Waxaan ku jirnaa geeddi-socod aan ku horumarineyno wax la mid ah, ma ogi haddii aad si guud u bixinayso ama xitaa iib ah.
Sep 18, 2015 at 12: 38 PM
Haddii aad tahay horumariyaha WordPress, waxaan si daacad ah u jeclaan lahaa inaan kugu daro qoraa ahaan adiguna aad la wareegto!